Solonandrasana Mahafaly Mba mitsapa vintana ihany koa
Minisitry ny atitany “Miandry kely aloha ny fampiharana ilay satan’ny mpanohitra”
Noheverina fa tsy hisy intsony ny sakantsakana mahakasika ny fanoherana eto Madagasikara ka hisy amin`izay ny fifandanjan-kery eto amintsika.
Depiote Dr Fiarovana Lovanirina “Mila hatsaraina ny lalàna momba ny fahasalamana”
Anisan’ny andrim-panjakana iankinan’ny aim-pirenena ny antenimieram-pirenena.
Distrikan` i Mahabo Mangataka ny fijerena ny solombavambahoakany
Nidina an-dalambe ny mponina tao amin`ny distrikan`i Mahabo mba hangataka amin’ny fitondram-panjakana hijery ny depiote voafidy tany aminy dia Raveloson Ludovic dit Leva Sydney.
Niray feo ny depiote Lany 100% i Christine Razanamahasoa
Lany ho filohan’ny antenimieram-pirenena Rtoa Razanamahasoa Christine, solombavambahoaka IRD ao amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana omaly.
Toeran’ny Lehiben’ny mpanohitra Mbola mifanenjana ny TIM sy ny fitondrana…
Ny lalàna misy momba ny satan’ny mpanohitra sy Lehiben’ny mpanohitra eny amin’ny Antenimiera dia tsy mbola misy didy fampiharana, ka tompon’andraikitra tanteraka ny governemanta amin’ny famoahana an’io.
Madagasikara Lasa fisolelahana ny fanaovana politika
Tena mbola ao anatin’ny fianarana demokrasia sy repoblika isika izao, hoy ny mpanao politika, Dany Rakotoson. Antony dia matetika afangarontsika sy lasa bontolo ny adihevitra.
Vondrona IRD Tsy maika hanendry praiminisitra
Tsy mbola miditra amin`ny fanolorana ny anaran`ny praiminisitra ny vondrona IRDA amin`izao. Mandeha miandalana ny zavatra rehetra, hoy ny fanehoan-kevitra sasany.
Tsy hetraketraka na fitiavana voninahitra ho ahy manokana no hirotsahana hofidiana filoham-pirenena fa adidy goavana eto amin’ny firenena izany, hoy ny Praiminisitra teo aloha Mahafaly Solonandrasana Olivier, kandidan’ny antoko Orimbaton’i Madagasikara na ny OM.
Amin’ny maha olom-pirenena dia manana adidy sy andraikitra hitondra ny anjara biriky eo amin’ny fampandrosoana, hoy izy. Efa tao anatin’ny governemanta tokoa aho ary aminay sy ny filoham-pirenena dia tsy misy ny olana, ary tena marina tokoa izany, hoy izy. Tsoriko, hoy ity kandida ity, fa tena nandray tombontsoa be dia be ary nisy zavatra nahafinaritra niarahana hatramin’izay ka hatramin’izao fa niteny foana aho hoe tsy azo hafangaro ny raharaham-pihavanana sy ny raharaham-pirenena. Nilaza moa izy fa mpanatanteraka ihany fony praiminisitra, fa izao izany hitondra ny tena heviny sy ny programany, ary tonga ny fotoana hitondrana ny vinan’ny tena fampandrosoana firenena. Izay no hilazako hoe izaho tsy hitoetra amin’ny toeran’ny mpanohitra, fa hitoetra amin’ny toeran’ny mpanarina. Nisy ny zavatra nisy teo amin’ny fitondrana nifanesy, ka anjaran’ny kandida no mijery izay heveriny hanarenana izay lesoka izay. Ny tena fanevany dia ny tsy havadika intsony ny pejy “Aleo soloina ny boky dia andao hanoratra pejy vaovao ao anatin’ny boky vaovaon’ny tantaran’i Madagasikara”. Aleo halevina amin’izay izay mety ho lonilony, hoy ity kandida ity. Aoka izay ny hoe nahavita fe-potoana iray ny filoha, dia tsy handeha hanao sesin-tany foana.